Tababar Ku Saabsanaa Doorka Warbaahinta Ee HIV/AIDS Oo Lagu Soo Gebagebeeyey Hargaysa | Somaliland.Org
Tababar Ku Saabsanaa Doorka Warbaahinta Ee HIV/AIDS Oo Lagu Soo Gebagebeeyey Hargaysa
February 23, 2013	Hargaysa (Somaliland.Org): Aqoon isweydaarsi socday saddex maalmood oo ku saabsanaa doorka warbaahinta iyo xannuunka HIV iyo AIDS, oo ay wadar jir u qabteen Komishinka Qaranka ee la dagaalka HIV/AIDS (SOLNAC) iyo haya’da qaramada midoobay ee UNDP,ayaa lagu soo gebagebeeyey Hotel Imperial ee Hargeysa. Aqoon isweydaarsigan oo socday 19 February ilaa 21 February islamarkaana ay ka soo qayb galeen ka qayb galayaal ka kala socday qaybaha warbaahinta Somaliland, ayaa waxa xidhitaankii ka soo qayb galay mas’uuliyiin ka socday Solnac iyo UNDP.
Dr. Cabdiraxmaan Cabdilaahi ( Cabdiraxmaan Geele) oo ka mid ahaa xubnihii bixinaayey casharadii tababarka, ayaa isna u sheegay ka qayb gelayaasha in marka ay ku noqdaan xarumaha warbaahinta ay ka tirsan yihiin ay dabaqaan aqoonta ay qaateen kana qayb qaataan sidii warbaahintu u yarayn lahayd faquuqida dadka la nool HIV ee bulshada dhexdeeda ah. “Xitaa waxa aad u yar ku baarujinta bulshada in la baro waxyaabaha lagu kala qaado xannuunka iyo waxyaabaha aan lagu kala qaadin, taasina waa ta keenta in qoysas badani iska fogeeyaan ama tuuraan dadkooda marka xannuunkii laga helo”. Ayuu yidhi Dr Cabdiraxmaan.
Waxa uu soo jeediyey in aanay dadka xannuunka la nooli ama uu ku dhacay aanay ahayn dad nasiib xun ee uu xannuun cid kasta ku dhici karo, sidaa darteed ay haboon tahay in dadka la nool HIV la soo dhoweeyo, dadka kalena laga wacyi geliyo. Waxa uu tilmaamay in warbaahintu ku dhiirin karto in dadka xannuun la nooli ay si fiican u qaadaan dawada, eheladooduna kala shaqeeyaan, sababta oo ah hadii qof dawada si fiican u qaato awoodiisa iyo jidhkiisu isma dhimayo, markaa waxa uu awood u helayaa inuu shaqaysan karo, haduu waalid yahayna caruurtiisa korsan karo.
Mr Musinguzi Edward oo isna ka mid ahaa dadkii soo jeedinayey macluumaadka, ayaa isna soo bandhigay xirfadaha suxufiyiintu isticmaalayso marka ay waraysanayaan dadka la nool HIV iyo marka soo bandhigayaan macluumaadka xannuunkan. Sida loo soo bandhigi karo warka dadka la nool HIV, iyada oo aan la magacaabayn iyaga oo iyagu ka raali ah mooyee.
Ugu danbayntii waxa la sheegay in xannuunka fidintaaskiisu socdo, hase ahaatee la aamusan yahay, dadka la nool xannuunkuna ay ka baqayaan bulshada hadii ay soo bandhigaan doorkooda wacyi gelinta. Sidoo kale waxa la sheegay in aan warbaahintu xil iska saarin ka wacyi gelinta bulshada ee cudurkan, islamaarkaana aanay abuurin doodo ku saabsan xannuunka iyo xaalladiisa.
Sidoo kale warbaahintu kama dhigto HIV/ AIDS mawduuc war ah oo ay ka hadlaan hogaamiyaasha bulshada iyo kuwa siyaasiyiintuba. Hassan Hussein Abdi
Previous PostWasiirka Duulista Oo Cayimay Xiliga La dhamaystirayo Casriyaynta Madaarka HargeysaNext PostMucaaridka Jabuuti Oo Markii U Horeysay Guul ka gaadhay doorashadii baarlamaanka	Blog